> Resource > Lugood > Sida loo Beddelaan Torrent in Lugood
Si aad u jiidi filimada torrent in Lugood for loo maqli karo in Lugood ama dhoofinta in aad qalab Apple, aad si joogto ah ay waajahaan laga yaabaa in dhibaato leheyn. Tan waxa u sabab ah in Lugood kaliya taageeraan MOV, MP4, iyo M4V qaab video, halka filimada Torrent caadiga ah ee AVI, MKV, ama qaab wmv yihiin, ma natively oo ay taageerayaan Lugood. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad ku raaxaysan files durdurkii la Lugood ama iyaga ciyaaro iDevice sida iPhone, iPad, iPod, iwm aad, iyagu marka hore loogu badalo in ay qaab Lugood-friendly. Si tan loo sameeyo, lagu kalsoonaan karo oo si sahlan loo isticmaalo video Converter waa gargaar aad u weyn.
Si loogu badalo torrent in Lugood, si dabiici ah waxaan ku talinaynaa Wondershare Video Converter u Mac . Barnaamijkan boosaska badan ka caawisaa ma aha oo kaliya si loogu badalo videos in Lugood, laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay astaysto videos by qaybsama, falinjeeerka, lana siii, ku dar subtitles, iwm waxa kale oo ay bixisaa filaayo in presets u iPhone, iPod, iPad, iwm, si loo yareeyo aad diinta aad bay u. Hoos yimaado tilmaan faahfaahsan, waa si dhab ah sida ugu fudud ee 3 tallaabo.
Fiiro gaar ah: Tilmaan-bixiyahan waxa ku qaadataa Screenshot Mac, laakiin labada qeybood oo ay leeyihiin ku dhowaad hawsha. Haddii aad tahay user Windows ah, Halkan Riix Guide Users Windows ' .
Tallaabo 1: Ku dar files torrent durdurkii in Converter Lugood
. 1) Click "File"> "Load Media Faylal ay" si ku shuban ah MTS videos aad rabto in aad si loogu badalo
2) Si fudud u jiidi oo hoos u Torrent videos aad ka miiska ama fayl kale barnaamijka.
Haddii aad leedahay labo ka mid ah files Torrent, iyaga wada shuban ah si loo badbaadiyo waqtiga iyo sahlo diinta.
Talaabada 2: Dooro wax soo saarka aad ka jeeclaadeen
Riix qaab icon in ay arbushin ilaa ay liiska qaabka wax soo saarka, ka dibna dooran saarka kahesho liiska format.
Waxaad dooran kartaa "M4V" ka "Video" ama presets u iPhone, iPod, iPad ee "Qalabka" category.
Talooyin: Video Converter u Mac sidoo kale siisaa hawlaha tafatirka kaas oo awood kuu inuu wax ka beddelo saarka video. Qalabka tafatirka Common waxaa la siiyaa: dalagga, jar, saamayn, watermark, subtitles (guji badhanka image Edit dhankiisa midigta oo ah video kasta item).
Tallaabo 3: Ka billow torrent in ay diinta ka Lugood
Riix ah "Beddelaan" button ha Converter Video for Mac qaadataa daryeelka durdurka in haya'ad Lugood. Waxay qaadan kartaa muddo ah, taas oo ku xiran file iyo tirada.
Taasi waa! Markii diinta ku dhameysatay, aad dajiyaan karaa faylasha diinta Lugood habsami leh ama dhoofinta in aad iDevice hadda. Isku day for free halkan!